Aliexpress मा बच्चाहरूको आकार। आकार कसरी बुझ्ने? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
Aliexpress मा बालबालिकाको आकार। आकार कसरी बुझ्न सकिन्छ?
अक्सर हामी बच्चाको लागि एलिप्रेसप्रेस वेबसाइटमा लुगाहरू अर्डर गर्दछौं, सिद्धान्तमा, नराम्रो साइट होइन, तर आयामी टेबलको साथ यो पूर्ण आपतकाल हुन्छ। सबै पछि, तिनीहरूले त्यसपछि आफ्ना बच्चाहरू मा सिलाई, र हाम्रो, उनीहरूको तुलनामा, वास्तविक राक्षसहरू हुन्। तसर्थ, आकारहरू फरक छन्। त्यसैले आकार २ टी उचाई cm ० सेमीको लागि, आकार T टी उचाई ११० सेमी, आकार T टी उचाई १ 2० सेमी। यो केहि हो। तर यी सबै शर्त छन्। विवरणका लागि विक्रेताहरुलाई सोध्नुहोस्।
धेरै चोटि मैले एलिएक्सप्रेसमा बच्चाको लुगा अर्डर गर्नु पर्थ्यो। मोडेलहरू फरक छन्, ठूलो आकार लिनु राम्रो हुन्छ ताकि गलत नहोस्।
नियमको रूपमा, ग्रिडको आकारले बच्चाको उचाईलाई संकेत गर्दछ। धेरै पटक यो मिल्दछ। उदाहरणका लागि, १. years बर्षमा मेरा बच्चाहरूको लागि म २ टी लिन्छु, र 1,5. years वर्षमा। टी वा T टीमा मार्जिनका साथ।
Cm० सेमी = २t
१२० सेमी = tt।
कहिलेकाँही महीनाहरूमा आकारहरू संकेत गरिन्छ।
त्यसो भए यो यो जस्तो हुनेछ:
१०-१२ महिना = cm० सेमी
१-13-१-18 महिना = cm० सेमी
१ -19 -२24 महिना = cm ० सेमी।
सबै कुरा मसँग मिलेको थियो। मैले १ 1,5 .२ १ -19 -२24 महिनाको उमेरमा मेरी छोरीलाई अर्डर गरें, यो अलि धेरै ठुलो थियो। फेरि, सबै कुरा बच्चाको विकासमा निर्भर गर्दछ।
र केहीको लागि मात्र यो महिनौं लेखिएको थियो, मैले १०-१२ महिना रोजें, र म व्यर्थमा सोच्छु, यो पर्याप्त छैन ((((((((छोरा अब 10 12 सेमी अब 76 XNUMX सेमि हो
२ टी इत्यादीको आकारका नभई अर्डर गर्नु उत्तम हुन्छ, तर केवल लुगाको लम्बाई, चौडाई हेर्नुहोस् र बच्चाले लगाएको एउटासँग तुलना गर्नुहोस्। प्रत्येक विक्रेताको आफ्नै ग्रिड हुन्छ, जससँग तपाईंले अवस्थित कपडाहरूको तुलना गर्नुपर्छ। यदि आकारको बारेमा शंका हो भने, विक्रेतालाई लेख्नुहोस्, उसले छनौटमा मद्दत गर्दछ।
एलिप्रेसप्रेस वेबसाइटमा दिइएका साइजहरू चिनियाँ साइजमा समायोजित हुन्छन्। उदाहरण को लागी, 2T को आकार cm cm सेमी को विकास को लागी डिजाइन गरीएको छ। करीव २ बर्ष को लागी ।TT को आकार 96 -2-१११ सेमी को3देखि 98 बर्ष सम्मको बच्चाको विकासको लागि डिजाइन गरिएको हो। त्यसकारण, म जहिले पनि सबैलाई साइटमा केहि खरीद गर्नु अघि सबैलाई सल्लाह दिन्छु, पहिले विक्रेतालाई लेख्नुहोस् र उहाँलाई सबै प्रश्नहरू सोध्नुहोस्।
र त्यहाँ जुत्ता आकारहरू कसरी गणना गरिन्छ? मेरो छोरीको खुट्टा १ 13,5..XNUMX सेमी छ।
तपाईलाई मनपर्ने चीजको साथ पृष्ठ स्क्रोल गर्दै, तपाई साइज डिक्रिप्शन देख्न सक्नुहुनेछ।
२ टी उचाई2cm सेमीको लागि
3T - 100 सेमी
- - १० cm सेमी
4T - 110 सेमी
१० -१10० सेन्टीमिटर
म सँधै विक्रेतालाई सम्पर्क गर्दछु, आवश्यक मापन लिन उसलाई सोध्छु, र त्यसपछि मात्र बनाउन र अर्डरको लागि भुक्तान गर्दछु। तिनीहरू अहिले सम्म कहिल्यै धोकामा परेका छैनन् र चीजहरू सधैं सही आकारमा आउँदछन्। सामान्यतया यो साइटको कपडाको आकार मेरो रूसी भन्दा १ फरक छ, र जब २ आकार ठूलो साइडमा हुन्छन्।
चिनियाँ वेबसाइट Aliexpress मा आकार रूसी भन्दा केही फरक छ। सब भन्दा सानो साइज २ टी बराबर2cm सेन्टीमिटरको बृद्धि हो। विकासका लागि T टीको आकार ठ्याक्कै १ मिटर छ र त्यस्तै। आकार बीचको भिन्नता cm सेन्टीमिटर हुन्छ। ठूला लुगा लिनु राम्रो हुन्छ, किनकि तिनीहरू एकदम सानो हुन्छन्। डाइमेन्सन जाल रिटेलर द्वारा फरक हुन सक्दछ। आकारका बारे अधिक जानकारीको लागि, एक विशिष्ट उत्पादको विवरण हेर्नुहोस् वा विक्रेतासँग यो प्रश्नको स्पष्टीकरण गर्नुहोस्।
कुन साइज तपाईले cm २ सेमी मा किन्नु पर्छ
प्रत्येक चीजको नजिक आकारहरूको डिकोडिंग हुन्छ। तर चिनियाँ चीजहरू सामान्यतया उद्धृत हुन्छन् भन्ने कुराको लागि मात्र संशोधन गर्नु आवश्यक छ; सानो आकारको उद्धरण ;, तर बच्चाको व्यक्तित्वका लागि पनि। त्यहाँ ठूला बच्चाहरू छन्, त्यहाँ छन् - धेरै छैन। उदाहरण को लागी, म ११ वर्षीया केटी को लागी लुगा लिन सक्दिन, उनी १ 11 बर्ष सम्म पनि लुगा फिट गर्दैनन्।
शायद यस अवस्थामा सबैभन्दा भरपर्दो समाधान भनेको विक्रेतालाई लेख्नु हो र कुन आकार चाहिन्छ भनेर तोक्नु हो, के आवश्यक छ भनेर वर्णन गर्दै - धेरैले गल्ती नगर्न क्रममा गर्छन् (यदि विक्रेताको राम्रो प्रतिष्ठा र रेटिंग छ भने उसले पक्कै मद्दत गर्दछ)।
पोस्ट सामान र सेवाहरू
22 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,505 प्रश्नहरू।